Pero: Mampidi-doza Ny Rano Any Iquitos Ny Voly Tokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2012 12:04 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, Français, Italiano, русский, Español
Ity no laharana fahatelo sady farany amin'ny andian-dahatsoratra telo momba ny olana mikasika ny rano ao amin'ny tanànan'i Iquitos. Jereo ny voalohany sy ny faharoa.
Tsy hoe tsy tandindonin-doza akory ny ady rano any Iquitos. José Álvarez, mpikaroka iray ao amin'ny IIAP (Ivotoeram-pikarohana Ambony Amazona Peroviana),dia namoaka lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe : “Voly tokana ao Nanay? Tsia misaotra”, [es] izay nilazany ny anton'ny tsy ankasitrahan'ny IIAP ny fambolena voanio hakana menaka ao amin'ny lemak'i Nanay, indrindra, ao amin'ny lemaky ny ranon'i Curaca, sampan-dranon'i Nanay, mifanila amin'ny Valan-javaboaharin'i Allpahuayo-Mishana.
Amin'ny fanambaràna [es] nataon'ireo manohana ny mpikaroka , nisy fokonolona ao Iquito niteny fa rehefa avy niresaka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana, dia nolazainy fa ” kianina i Álvarez noho izy tsy nanaiky ny fampiroboroboana ny fambolena voanio fakana menaka ary lavina noho izany ny fampindramam-bola nataon'ny governemanta” izay no niheverana fa ny loharanon'io fanenjehana io dia avy amin'ireo manampahefana ao amin'io faritra io.
Tsy ny hevitry ny olona rehetra anefa no manohitra io fambolena voanio fakana menaka any amin'ny lemak'i Nanay io. Mankasitraka izany ny mpahay toe-karena Víctor Villavicencio la Torre, izay Talen'ny Fampandrosoana ara-Toekarena amin'ny governemantan'ny faritr'i Loreto, ary manoratra [es] :
Ankoatra izay,ireo eny amin'ny sekoly ambony sy ny mpikaroka dia manohy manome angon-drakitra sy mandinika [es] ny momba ny loza ateraky ny fambolena voanio fakana menaka amin'ny rafitry ny tontolo marefo Amazoniana. Lazain-dry zareo aza fa anatin'ny fambolen-kazo ny fambolena voanio fakana menaka mba hakana vola azo avy ny amin'ny governemanta amin'ny fanaovana izany.
Loharanon-dahatsoratr'i Juan Arellano ao amin'ny bilaoginy manokana [es].